चिया, साथी र गफलाई जोड्दै – चियाघर – HamroKatha
चिया, साथी र गफलाई जोड्दै – चियाघर
आधिकांश चिया खाने ठाउँ साघुरो स्थानमा संञ्चालन भएका छन । जसले गर्दा चिया खादै आनन्दले बस्न र चाहे जसरी साथीसगं गफ गर्न सकिने परिस्थिति छैन । यो समस्या समाधान गर्दै व्यवसाय गर्दा कसो नचल्ला त ?
हाम्रो कथा २०७५ चैत २६ गते १७:१५
चिया पकाउनु पनि एक कला हो भनेर चिया घरले प्रमाणित गरेको छ । चियामा पनि यति धेरै विविधता हुने रहेछ भनेर बुझ्न चिया घर पुग्नु पर्दछ ।
यो चिया घरले नयाँ स्वादमा ,शौलीमा र फरक माहोलमा चिया खान चाहने जो कोहिको ध्यान तानेको छ ।
यो चिया घर सुरु भएको जम्मा डेड वर्ष भयो । एउटा सानो कोठाबाट डेड लाख लगानीमा सुरु भएको चिया घर अहिले यति ठूलो क्षेत्रमा विस्तार मात्र भएको छैन । चिया घर भीमसेनगोलामा छ । यो पुरानो बानेश्वर चोक देखि सिनामंगल जाने बाटोमा पर्छ ।
यसको अर्को ब्रान्च पेप्सिकोलामा खुलिसक्यो । अन्य ब्रान्च समेत खुल्ने तयारीमा अघि बढिरहेको छ । साच्चै भन्ने हो भने यसको व्यवसायीक यात्रा जो कोहिका लागि वा ! पैसा यसरी पो कमाईने रहेछ भन्ने राम्रो उदाहरण बनेको छ ।
अहिले भने चिया घर कसरी जन्मियो ?
अर्घाखाँचीमा जन्मी काठमाण्डौमा हुर्केका हुन राजिब शाही। राजिब सहित उनको एक समुहले सुरु गरेको हो यो चिया घर ।
आर्थिक हिसाबले न्यून आय भएका परिवारका व्यक्ति हुन राजिब शाही । १० कक्षा पास भएपछि पैसा कमाउनकै लागि भनेर उनले लेवरको काम गरे । पसलमा जागिर खाए । केहि पैसा जुटेपछि उनलाई लाग्यो । सधै यस्तै गरेर त कसरी जीन्दगी चल्ला र । एकजना साथीसंग मिलेर प्लाई बेच्ने पसल पनि सुरु गरे । तर उनलाई गर्न धेरै मन थियो । पैसा कम थियो । सोचे बमोजिम काम गर्न सकेनन ।
उनी ट्रेकिङ पेशामा लागे । यसै समयमा उनले धादिङमा एउटा इभेन्ट पनि गरे । ईभेन्टका क्रममा धेरै साथीसंग भेट भयो । यहि कार्यक्रमले उनीहरुलाई उद्यममा लाग्ने वातवरण समेत बनादियो । त्यसपछि पाँच जना साथीले केहि रकम जुटाए । त्यहिबाट सुरु भएको हो चियाघर ।
उनीहरु चिया व्यवसायमै लाग्नुका पनि केहि कारण छन् !
अधिकाशं चिया खाने ठाउँ साघुरो स्थानमा संञ्चालन भएका छन । जसले गर्दा चिया खादै आनन्दले बस्न र चाहे जसरी साथीसगं गफ गर्न सकिने परिस्थिति छैन । यो समस्या समाधान गर्दै व्यवसाय गर्दा कसो नचल्ला त ?
चिया घरका सञ्चालक राजिब शाही बताउँछन् ,“पहिले देखी नै चिया घर गर्छु भन्ने सोच थियो । प्लस टु पढ्दाको समयको सोच चिया पसलमा समय धेरै बिताईन्थियो । समय बिताउन कफी सप जाउँ भने महँगो पर्ने। अन्य रेस्टुरेन्ट जाउँ भने पनि बजेटले नभ्याउने । त्यसैले चिया पसल खोज्दै जानु पर्थियो । फेरी ती चिया पसलहरु साघुरो हुने । हतार हतार चिया खेर अर्कोलाई बस्न ठाँउ छोड्नु पर्ने ।”
दोस्रो शाही आफैले ट्रेकिङको काम गर्दा विभिन्न ठाउँमा पुगे । जहाँ जहाँ पुगेर उनले चिया खाए चियाको स्वाद पनि भिन्न भिन्न पाए । बल्ल उनले बुझे चिया पनि भिन्न प्रकारको बन्दो रहेछ । यस्तै भिन्न प्रकारको चिया बनाएर व्यवसाय किन नगर्ने ?
व्यवसाय सुरु भयो । तर ग्राहक आउदै आएनन । यसका सञ्चालकहरु दिनभर यतिकै बस्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । संगै लगानी गरेका २ जना आत्तिए । व्यवसायबाट हात झिके । तर अन्य ३ जना भने यहि व्यवसायलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने तर्फ घोत्लिन थाले । बजारीकरणका बारेमा बुझ्न थाले ।
राजिब शाही थप बताउँछन् ,“नेपालका विभिन्न ठाँउ घुम्दा थाहा भयो कि चियाको पनि धेरै भेराईटी हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि हामीले थोरै प्रोफिट मार्जिनमा धेरै परिणामको चिया बनाउने रणनीति आप्नायौं।”
विस्तारै व्यवसाय उभो लाग्न थाल्यो । जब व्यवसाय उकालो लाग्न थाल्यो । उनीहरुको ग्राहक मात्र बढेनन । मन पनि बढ्यो । चिया घर ठूलो क्षेत्रफमा विस्तार भयो । चियाका प्रकार थपिए । बजार विस्तारको फरक रणनीति बन्यो ।
राजिब सुरुवाती समय सम्झन्छन्, “सम्भावित लगानीकर्ता, आफन्तहरुलाई आफ्नो चिया पसलमा साझेदारी गरौँ भन्दा उनीहरुको जवाफ हुन्थियो, ‘होइन ! चिया पसल त नगरौं होला।’ पछी चिया घर आएर मात्र विश्वास गर्नु हुन्थियो कि चिया पसल पनि यति राम्रो संग गर्न सकिने रहेछ।”
अहिले त यहाँ विहानदेखि साझ सम्म नै चिया पकाउन भ्याई नभ्याई छ । अब यो चिया घर पुरानो वानेश्वमार मात्र सिमित छैन । काठमाण्डौका विभिन्न स्थानमा बन्दैछ । देशैभर फैल्न खोज्दै छ ।
लगानी नै ५० लाख भन्दा बढि भईसक्यो । चिया घरलाई ठूलो बनाउन लगानीकर्ता नै १० जना थपिएका छन । त्यसैले त पहिला चिया पसल गर्छु भन्दा नाक खुम्च्याउनेहरु अहिले भन्न थालेका छन , यस्तो पनि हुदो रहेछ ।
राजिब व्यक्त गर्दछन् , “ठुलो र फराकिलो चिया पसलको सपन देखे पछी बिस्तारमा त लाग्नै पर्यो ! चिया घरमा ग्राहकको हुल बढे पछि, ठाउँ विस्तार गर्यौं, भेराईटी विस्तार गर्दै गयौं, मार्केटिंगका योजना विस्तार गर्दैं लाग्यौं।”
चिया घरले बनाउन त चिया नै बनाएको हो । बेच्ने पनि चिया नै हो । अनी फरकपन खोजेको पनि चिया बेच्न नै हो ।
तर यसमा उनीहरुले मुख्य रुपमा ३ कुरामा ध्यान दिए ।
१) चियाको परम्परागत स्वादमा परिमार्जन
२) चिया पस्कने नयाँ शैली र
३) ग्राहकका लागि फरक प्रकारको माहोल ।
अर्को सामान्यतया हामी चिया पिउन विभिन्न ठाउँहरुमा पुग्छौ । जहाँ शिशा, स्टील वा कागजको कपमा चिया दिने गरिन्छ । तर चिया घरमा माटोको स-साना यस्ता कपमा चिया दिईन्छ । जुन अरु ठाँउको कप भन्दा फरक छ । अनी यहि सानो माटोको कपमा अटाएको मसालेदार चिया हो । जुन निकै स्वादिष्ट छ ।
चिया घरले चियालाई परम्परागत रुपका टेष्ट भन्दा भिन्न स्वादमा चिया ग्राहक समक्ष प्रस्तुत गर्यो जस्तो । मसला स्विट र मट्का मसला प्रयोग हुन्छ । जुन मसला उनीहरु आफैले बनाएका हुन । चियामा पानीको प्रयोग अति न्युन हुन्छ । यो मड्का चियाले जिब्रोलाई क्रिमी फ्लेभरको अनुभव दिन्छ । यसले गर्दा यो स्वादको चिया खाएपछि केही समयसम्म जिब्रोमा स्वाद बसिरहन्छ । त्यसैले ग्राहकले यो चिया अत्याधिक मन पराएका पनि छन् ।
सामान्यतया चिया खाने ठाउँ सानो क्षेत्रफलमा सञ्चालन भएको हुन्छ । एक जना ग्राहकले चिया खाई नसक्दै अर्को मान्छे आए भने बस्ने ठाउँ नै हुदैन । तर चिया घर को अर्को विशेषता ठूलो क्षेत्रफल हो । यहाँ चिया बेच्नकै लागि यसका सञ्चालकले यति ठूलो ठाउँ लिएका छन् । चिया, साथी र गफ त उनीहरुको व्यवसायको प्रमोशन कोड नै हो । अनी चिया खादै गफ गर्ने जो कोहिलाई यहि जाउँ-जाउँ लाग्छ।
चिया खाएपछि माटोको कपमा आफ्नो मनपरेको कुनै नाम वा सम्झनाको लागि विभिन्न कुराहरु लेखेर सजाएर राख्ने व्यवस्थासमेत चिया घरले गरेको छ । यहाँ पुग्ने ग्राहकलाई चिया घरको यो व्यवस्था पनि नयाँ लाग्छ । किनकी चिया पनि खान पाईने, आफुलाई मन परेको कुरा लेखेर राख्न पनि पाईने ।
साच्चै भन्ने हो भने अहिले चियाको बजार बढ्दो क्रममा छ । चिया घर चिया बजार र यसवको व्यवसायीक सम्भावनाको गतिलो उदाहरण पनि हो । कुनै पनि काम सिर्जनात्मक ढंगले गर्ने हो भने सम्भावना र अवसरहरु जहाँ कहि हुदाँ रहेछन् ।
चिया घर सञ्चालन गरेर यसका सञ्चालकले कति कमाए होलान ?
अब फेरी लागौ चिया घरको दैनिक सेल्स तर्फ । यो चिया घरमा १५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढि मुल्यको चिया दैनिक रुपमा बिक्रि हुन्छ । दैनिक १५ हजार रुपैयाँको चिया विक्छ भन्दा पनि मासिक करिब साडे ४ लाख रुपैया र वार्षिक ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको चिया बिक्रि यस पसलबाट हुन्छ ।
यस चिया पसलमा ३० रुपैयादेखि ३०० रुपैयाँ सम्म मुल्यका चिया पाईन्छ । यस पसलमा निकै लोकप्रिय रहेको चिया मड्का चियाको मुल्य ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
राजीब आफ्नो आर्थिक उपलब्धी बारे बताउँछन्, “हामीले कमाए जति चिया घरको विस्तारमा लगानी गरेका हौँ। विस्तार नियमित रुपमा भई रहेको छ। यसले बुझाउँछ कि कमाई राम्रो भएको छ।”
डेड वर्ष अघि जम्मा डेड लाख रुपैया जति लगानीमा सुरु भएको चिया घरको यो अहिलेको कमाई साच्चै जो कोहिलाई लोभ्याउने छैन र ?
राजीबले आफ्नो कार्यशैली बारे पनि बताए I उनले बताए कि व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा अघि लग्न ५ वटा टीमलाई संगै लागिएको छ ।
१) प्रोडक्सन तथा क्वालेटी टीमले निरन्तर रिसर्च र ईनोभेसनमा काम गरिरहेको छ ।
२) सप्लाई र स्टोर टीमको जिम्मेवार भएकाले ग्यास, दुध, पानी, भाडाको कमी भएको छैन ।
३) फाईनान्स टीमले खर्च नियन्त्रण र उपयुक्त श्रोतमा खर्च गर्न मद्धत गर्छ ।
४) मार्केटिंग टीमले गर्दा ग्राहक र लगानीकर्ताको संख्या बढेको छ ।
५) एडमिनको जिम्मेवारीमा नियमित चियाघर संचालन भई रहेको छ ।
त्यसैले, सबै टीमको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। चिया घर आज जुन रफ्तारमा अघि बढी रहेको छ र जसरी विस्तार भई रहेको छ, यसको मुख्य कारण उचित व्यवस्थापन नै रहेछ I